Qaxootiga reer Burundi oo ku dhibaataysan gudaha J.D.Kongo – Kasmo Newspaper
Qaxootiga reer Burundi oo ku dhibaataysan gudaha J.D.Kongo
Updated - October 20, 2017 2:33 pm GMT
London (Kasmo), Xaaladda Qaxootiga Burundi ee ku sugan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo ayaa laga dayrinayaa, iyada oo la sheegayo in ay soo foodsaartay gaajo iyo macalul xoog leh. Sida laga warinayo Tv-ga Al-Jazeera qaybtiisa afka Ingiriisiga, cuntadii oo gabaabsi noqotay ayaa keenaysa in dadku bilaabaan in ay gaajo u dhintaan hadda.
Qiyaastii 40,000 oo reer Burundi ah oo qalalaasaha dalkooda ka bilowday 2015kii ka soo cararay ayaa gudaha Kongo soo wajahaya duruufo la mid ah kuwii ay ka soo qaxeen.
Bishii April 2015kii Madaxweyne Pierre Nkurunziza, oo xilka hayay laga bilaabo 26kii Agosto 2005, ayaa goostay in uu markii 3aad oo xiriir ah u tartamo jagada Madaxweynaha. Qalalaasihii ka bilowday wuxuu ku khasbay dad gaaraya 380,000 in ay u cararaan dalalka dariska, gaar ahaan Tanzania iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo.
Xaladdu aad ayay u xuntahay, ilaa Qarammada Midoobay, 4tii September 2017kii, ku eedeysay Xukuumadda Burundi, dunuub ka dhan ah Aadanaha, isla markaasna amartay in Maxkamadda Caalamiga ah laga furo gal-dacwadeed rasmi ah.
Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo qudheeda, oo sannadkii 1960kii ka xorowday Belgium, kama dhicin waligeed kalaguur siyaasadeed oo nabad ah. Laga soo bilaabo Disembar 2016kii, rabshadaha ayaa sii kordhay, gaar ahaan bariga dalka, ka dib markii Madaxweyne Joseph Kabila, ku dhawaaqay in uu xilka u tartami doono markii 3aad oo xiriir ah.
Ururka Amnesty International ayaa warinaya in kooxo hubaysan iyo xoogagga nabadgalyada ee Xukuumaddu, si joogto ah ugu tuntaan xuquuqda dadweynaha caadiga ah.
18kii Septembar qaar ka mid ah askarta J.D.Kongo waxay ku dileen 36 qaxootiga Burundi ah, iska horimaad ka dhashay cabashooyin lagu codsanayay soo daynta dad looga xiray magaalada Kamanyola ee bariga Kongo.